Hargeysi Jahwareer iyo Yooyootan uma Baahna! • Oodweynenews.com Oodweyne News
Hargeysi Jahwareer iyo Yooyootan uma Baahna!
Waxaa isweydiin leh waxa Hargeysa looga xarimayo farxada iyo deganaanshaha caasimad goboleedyada kale. Waxay ila tahay inay sabab u yihiin.
Murrashaxiinta loo doortay oo dhallinyaro u badan, la socda xaaladda waaqiciga ah ee dalka, una diyaar ah inay wax ka beddel ku sameeyaan qaababkii hore.
Qaar ka mid ah siyaasiyiintii ruug cadaaga ahaa, oo muddooyinkii ay xilalka soo hayeen laga dheregsan yahay nooca waxqabadkoodu ahaa, ayaa u eg in qaab dhaqameedkii hore ee yooyootanka ku sallaysnaa, u arkaya in aanay dhallinyaradu ku dhaqmi doonin.
Aragtida hordhaca ah ee dhallinyarada la doortay waxa ka muuqata in jiilkii ka horreeyey, ahmiyada ay ku lahaayeen masraxa siyaasadeed ay waayi doonaan. Shacbiguna dhegahoodu sida uu uga nastay intay ololaha doorashada iyo doorashadu intay socdeen uga nasteen ay daayimi doonaan.
Suxufiyiinta oo kaalin mug leh ka qaatay hirgalka doorashada iyo soo jiidashada indhaha caalamiga ah, oo la doonayo in waayo aragnimada sharci ee ku yar laga faa’iidaysto.
Mudaneyaasha la soo doortay, maanta waxay wadaagaan- tiro kasta oo ay ku soo baxeen magaca “Xildhibaan”. Iyaga ayaana xaq u leh xorna u ah markay kulmaan inay noo soo xulaan dadka ay u arkaan inay hoggaamiyaan, ujeeddadii iyo balanqaadyadoodiina la fulin kara.
Mudaneyaasha loo doortay deegaanka Hargeysa, waxaan xusuusinayaa in codka loo siiyey kalsooni lagu qabo inay caasimada ka dhigaan mid u qalanta caasimad JSL. Waana balanqaadkiinii. Noqda kuwo danaha guud ka hormariya kuwa gaarka ah, dhaarta ay mari doonaan sideeda ugu dhaqma. Shakhsiyaadka danaha gaarka ah leh iska ilaaliya. Khilaafka dhexdoodana ogaada inuu waxyeelo u geysan karo shakhsiyadooda iyo danta guud ee Hargeysa.
“Allahayoow tubta toosan ku toosi”
Qore Xuseen Cali Nuur